လုပျခငျြတဲ့ဆန်ဒကို – My Blog
ညနကေတညျးက ညစာအတှကျထမငျးကို တဝတပွဲစားထားပွီးပွီ။ ဒီနေ့ သိနျးဆောငျ ကွကျခွံမှာစောငျ့အိပျမှဖွဈမယျ။ သူ့ရှာက ကောငျတှအေကွောငျးကို သိနျးဆောငျ ကောငျးကောငျးသိတယျ။ တနျဆောငျတိုငျည အတှကျ ရှာကကာလသားကောငျလေးတှရေဲ့ ပဈမှတျက သူ့ရဲ့ကွကျခွံ ဖွဈနမေယျဆိုတာ မွကွေီးလကျခတျမလှဲ။ နောကျနမှေ့ ကွကျခိုးတဲ့လူတှကေို သိလို့အရေးယူပေးပါ သှားပွောလို့မရဘူး။ တနျဆောငျတိုငျညမှာ ရှငှေေ အဖိုးတနျပစ်စညျးမဟုတျပဲ အသေးအမှားခိုးတာလောကျနဲ့တော့ ထုံးတမျးအစဉျအလာပဲဆိုပွီး အရေးယူလမေ့ရှိဘူး။ ရှာထဲမှာလညျး ဧညျ့လာရငျကြှေးမှေးဖို့ ဟငျးမရှိတဲ့အခါ ခကျြစားဖို့တဈနိူငျတဈပိုငျ ကွကျမှေးကွပါတယျ။
ရှာထဲမှာ တနျဆောငျတိုငျညပွီးရငျ ကွကျမပြောကျတဲ့အိမျဆိုတာ မရှိသလောကျပဲ။ ကို့ယျအိမျကကွကျသူခိုး သူ့အိမျကကွကျကိုယျခိုးနဲ့ ပတျခြာလညျနတေယျ။ သိနျးဆောငျတို့ရှာမှာ တနျဆောငျတိုငျညဆိုတာ ကွကျခိုးကိုခိုးရမယျလို့ အစဉျအလာဖွဈနတေော့တာပဲ။ သိနျးဆောငျ ရဲ့ကွကျခွံမှာ ကွကျဖရော ကွကျမရော စုစုပေါငျးဆို ၅၆၈ကောငျရှိတယျ။ ကွကျဥ တှကေို မွို့ပျေါကဈေးမှာ တဈပတျတဈခါ ဖောကျသညျဈေးနဲ့သှားသှငျးလရှေိ့တယျ။ သူ့ကွကျခွံမှာ ဟိုဘကျရှာကကောငျလေးတဈယောကျကို အလုပျသမားခနျ့ထားပါတယျ။ ရှာခဏပွနျခငျြတယျဆိုလို့ မနကေ့တညျးက လှတျလိုကျရတာပငျ။ နဲနဲမှောငျလာတော့ နခေ့ငျးကတညျးက ပွငျဆငျထားတဲ့ပစ်စညျးတှယေူပွီး ကွကျခွံကိုသှားဖို့ပွငျရတယျ။
ပစ်စညျးဆိုလို့ ထှထှေထေူးထူးတော့ မဟုတျပါဘူး။ လောကျလေးခှတဈလကျ၊ လောကျစာလုံးထညျ့ထားတဲ့လှယျအိတျနဲ့ ဒီနမှေ့ဓာတျခဲအသဈလဲထားတဲ့ ငါးဆဈထိုး ဓာတျမီးတဈလကျပါ။ အဲ တဈညလုံး မအိပျပဲစောငျ့ရမှာဆိုတော့ အောငျဘုဆိုငျကဆှဲလာတဲ့ ဆနျအရကျတဈလုံးနဲ့ မိနျးမပွငျပေးထားတဲ့ ငါးရံ့ခွောကျဖုတျ ပနျးကနျကလညျး မပါမဖွဈပေါ့။ “မိနျးမရေ •• အခနျးထဲ က ဖကျကွမျးဆေးလိပျစညျးနဲ့ မီခွဈရောပေးပါဦးဟ” “လာပွီ ကိုသိနျးဆောငျ တျော ညကရြငျ အဖနျရညျနဲ့မွညျးဖို့ ပဲပွုတျအိုးပွငျနလေို့ ခဏ” “ရော့ •••ဘာလိုသေးလဲ တျော တဈခုခုလိုရငျကြုပျကို အျောချေါလိုကျ ကြုပျယူလာပေးမယျ”
“ငါ့မိနျးမကို အဲဒီလိုအလိုကျသိတတျလှနျးလို့ ခဈြနရေတာ ဒီညတော့ ညစာငတျပါပွီ” “ဟမျ! တျော စောနကပဲ စာပွီးပွီလေ ပွနျဆာလာလို့လား” “မိနျးမကလဲ အဲဒီညစာမဟုတျဘူးလကှော ဟဲဟဲ” တဟဲဟဲ လုပျရငျး သူ့မိနျးမ ပေါငျကွားကို မကျြစပဈပွတယျ။ မိနျးမက ပငျကိုယျ ကကို အရှကျအကွောကျကွီးပွီး ရတာလညျးသိပျမကွာသေးတော့ မကျြနှာကွီးနီရဲလာပွီး “တျော နျော ကလေးကလားတှေ လာပွောမနနေဲ့ တျောမရှကျပမေယျ့ ကြုပျရှကျတယျ” သိနျးဆောငျက တဟဲဟဲရယျရငျး ယူစရာရှိတာယူပွီး ကွကျခွံဘကျကို ထှကျလာခဲ့တယျ~~~ သိနျးဆောငျရဲ့ကွကျခွံက အိမျနဲ့ခွံခွငျးကပျရကျဆောကျထားတာဖွဈသညျ။
အိမျခွံဝငျးက မလုံသျောလညျး ကွကျခွံကိုတော့ သံဆူးကွိုးတှနေဲ့လုံခွုံအောငျဆောကျထားတာပဲ ။ ဒါမယျ့မရ ရှာကကောငျတှကေ ရအောငျဝငျခိုးသညျ။ မနှဈကမစောငျ့လိုကျမိလို့ 15ကောငျလောကျပါသှားတယျ ဘယျနှဈဖှဲ့တောငျဝငျခိုးသှားလဲမသိဘူး။ လေးခှပါတယျဆိုသျောလညျး မှနျအောငျတော့ပဈလို့မရဘူး။ လူရိပျမွငျရငျ အစောငျ့ရှိကွောငျးသိအောငျ ခွောကျလှနျ့ရုံလောကျသာပဈရတယျ။ကွကျခွံရောကျတော့ ထငျးခွောကျတှစေုပွီး ပါလာတဲ့မီးခွဈနဲ့ မီးအရငျ ဖို ရတယျ ညဆိုနဲနဲအေးလာပွီလေ။ မီးဖိုဘေးမှာ ပါလာတဲ့အရကျလေးသောကျ အမွညျးလေးစားရငျး သိနျးဆောငျ စဉျးစားခနျးဝငျနမေိတယျ။
အိမျမှာ ခငျမအေေးတဈယောကျထဲ အိပျရတာကွောကျနမေလားမသိဘူး။ သူလဲမတတျသာလို့သာလာစောငျ့ရတာ ရခါစပူပူနှေးနှေး မိနျးမနဲ့ ခှဲအိပျခွငျတာမဟုတျ။ ညအိပျခြိနျလေးပဲဟိုဒငျး လုပျရတာမဟုတျလား။ မွို့ကအသိတဈယောကျကတော့ နညေ့အခြိနျမရှေးပဲ စိတျလာတဲ့အခြိနျထလိုးပဈတယျ လို့ပွောဖူးတယျ။ ရှာမှာတော့ နခေ့ငျးဘကျသူ့အလုပျကိုယျ့အလုပျ ကိုယျစီလုပျရငျး ညအိပျရာဝငျခါနီးမှသာ မှောငျမှောငျမဲမဲထဲမှာ အာဝါဟ ဝိဝါဟရတာဖွဈသညျ။သူ့မိနျးမခငျမအေေးက အရှကျအကွောကျကွီးတော့ပိုဆိုးသညျ မီးမှိနျမှိနျလေးတောငျထှနျးလို့မရ။ တကယျတော့ သိနျးဆောငျ အသကျလေးဆယျကြျော လူပြိုသိုးကွီးဖွဈမှအိမျထောငျကခြဲ့တာပငျ။
မိနျးမ ခငျမအေေးက အသကျ34 နှဈထဲမှာဖွဈပွီး သူ့ထကျ5နှဈကြျောကြျောလောကျငယျတယျ။ ခငျမအေေး အပြိုကွီးဖွဈနတော ကွိုကျတဲ့သူမရှိလို့တော့မဟုတျ ။ ရုပျကလညျး ရုပျရှငျမငျးသမီး ပနျးဖွူနဲ့ တူတယျလို့ ရှာထဲမှာပွောကွသလို တောသူပမေယျ့ အလုပျကွမျးမလုပျရပဲ အိမျထဲမှာပဲ အမွဲတမျး ရကျကနျးရကျနတောဆိုတော့ နမေထိတဲ့အသားက ဖွူဖှေးနတော။ ပငျကိုယျကဖွူတာလညျးပါတာပေါ့လေ။ခေါတျလူတှေ စကားနဲ့ဆို အဆဈအပေါကျကလညျိးု စှနျးကိတျနသေေးတာကိုလား ဒီရှာတငျမက ရှာနီးခွုံစပျမှာပါ ခငျမအေေးကို အသရေရ အရှငျရရဆိုတဲ့လူတှကေ နဲမှမနဲပဲ။ ဒါမယျ့ အနားတောငျမကပျနိူငျကွဘူး သမီးထိရငျ ဓားကွညျ့ဆိုတဲ့ သူ့အဖေ တပျထှကျလူကွမျးကွီးကိုကွောကျကွရတယျလေ။ သိနျးဆောငျက သာ ခေါငျကိုကိုငျပွီးသူ့အဖေ တပျထှကျကွီးကို အပီပေါငျးကာ ကွံဖနျခဲ့ရတာလေ။ ကိုယျတိုငျတောငျမသောကျရကျတဲ့ မွို့ကအရကျနီတှကေို သူ့အဖကွေီးဆီ ဆကျသခဲ့ရတာလညျးနဲမှမနဲပဲ။ သူ့အဖကေ ဒီကောငျမဆိုးဘူး လူကွီးကိုလူကွီးမှနျးသိတတျတယျ လူရိုးလေး လို့ဆိုတဲ့အခြိနျရောကျမှ နားဖောကျခဲ့ရတာကိုလား။
သူ့အမကေလညျး အလုပျအကိုငျနဲ့ ခွခွေမွေဈမွဈ ရှိတဲ့သိနျးဆောငျနဲ့ သဘောတူတယျ။ဒီတော့ မိဘစကားမွဝေယျမကနြားထောငျတဲ့ ခငျမအေေးဟာ သိနျးဆောငျနဲ့ အကွောငျးပါခဲ့ကာ ခုဆို တဈလလောကျတောငျရှိပွီပေါ့။ ခငျမေးအေးနဲ့ရပွီးကတညျးက သိနျးဆောငျလမျးလြှောကျရငျ ကမ်ဘာ မှာနယျပယျအမြားကွီး ခြဲ့ထှငျနိူငျခဲ့တဲ့ စဈဘုရငျကွီး တဈယောကျလို(အထငျနဲ့ ရမျးပွောတာပါ) ရငျဘတျကွီး ကော့ကော့ ကော့ကော့နဲ့ လမျးလြှောကျတော့တယျ။ မွငျတဲ့ လူတှကေတော့ မနာလိုတာရော သောကျမွငျကပျကွတာရောပေါ့လေ။ သိနျးဆောငျ အရကျသောကျရငျး တောငျစဉျရမေရ တှေးနမေိတယျ။ ကွကျခွံအနီးက ခွုံပုတျကှယျမှာ လူ၎ယောကျ လှုပျရှားနကွေတယျ။
ရှဆေုံ့းမှာရှိတဲ့ ရဲအောငျက ဒူးတဈဖကျထောကျကာ မုဆိုးထိုငျထိုငျပွီး လကျတဈဖကျမွောကျရငျး နောကျက လူတှေ ကိုငွိမျနဖေို့ အခကျြပွတယျ။ပွီးတော့လသေံ တိုးတိုးနဲ့ “ရဲ့ဘျောတို့ ခံတပျကိုတှနေ့ရေတယျ ဒီတိုငျးလှုပျရှားလို့မရဘူး ငါတို့လူခှဲမှဖွဈမယျ” မငျးဦးက ပွနျပွောတယျ “လီးတှပွေောနတောလား” “ရဲဘျောတို့ အမိနျ့ကိုနာခံပါ ယောကျြားလေးနှဈယောကျ သငျ့တျောရာကို လူခှဲကွ မသေူက ငါ့အနားမှာနခေဲ့ အခွအေနမေကောငျးလို့ တပျဆုတျရရငျ စုရပျမှာဆုံမယျ” တျောတျောကောငျးသညျ့ဗြူဟာမှူး မသေူကိုကတြော့သူ့နားမှာနတေဲ့ အဲဒီလို ဆရာလုပျလှနျးလို့လညျး အဲကောငျကိုကွညျ့မရကွတာ နောကျနဖေငျကို ပိတျကနျပဈလိုကျဖို့ တာကောငျးတယျ။ လောလောဆယျ မီးဖိုဘေးမှာ ဦးသိနျးဆောငျကိုမွငျနရေတာမို့ သူပွောတဲ့အတိုငျး လူစုခှဲဖို့လုပျကွတယျ။ သူတို့ပုံစံက ကွကျခိုးမယျ့လူတှနေဲ့မတူ ဓားစာခံကို လာကယျတဲ့ မရိနျးတပျသားတှကွေလို့။ ကွကျခွံကိုဘယျနားက ဝငျရငျကောငျးမလဲလို့ ရှာနရေငျးနဲ့ ဦသိနျးဆောငျအိမျနား တဖွညျးဖွညျးနဲ့ရောကျလာတယျ။
ဘာရယျမဟုတျ အိမျဘကျလှမျးကွညျ့တော့ အိမျရှအေ့ဖီထုပျပွီးမိုးထားတဲ့ အောကျကကှပျပဈ ပျေါမှာ လူတဈယောကျ စောငျခွုံပွီး ကှေးကှေးကွီးအိပျနတေယျ။ ဦးသိနျးဆောငျက ကွကျခွံမှာဆိုတော့ အိပျနတော မခငျမအေေးပဲဖွဈမယျလို့တှေးရငျး ငစိုးရငျခုနျသလိုလိုဖွဈလာတယျ။ အိမျထဲမှာ မအိပျပဲဘာလို့အိမျရှမှေ့ာ လာအိပျနတောပါလိမျ့ ။ ဒါမှမဟုတျ ဧညျ့သညျတဈယောကျယောကျမြားလား။ ငစိုးက မှောငျရိပျခိုလိုကျပွီး အိပျနတေဲ့လူကိုအနီးကပျခြောငျးကွညျ့နသေညျ။ ခေါငျးမွီးခွုံ ထားလို့ဘယျသူမှနျးသခြောမသိတာတောငျမှ မခငျမအေေးပဲဖွဈမယျဆိုပွီး ရငျကတဒိတျဒိတျခုနျလာတယျ။
သူတို့ကာလသားတှေ အပြိုကွီးဘဝတုနျးက မြှျောမှနျးစှဲလမျးခဲ့ရတဲ့ မခငျမအေေးမကျြနှာကိုတဈခါလောကျတော့ အနီးကပျကွညျ့ပွီး နမျးဖူးခငျြမိသညျ။ ငစိုးခွသေံလုံလုံ နဲ့အိပျနတေဲ့လူနားကပျသှားလိုကျတယျ။ ခေါငျးမွီးခွုံးထားတဲ့စောငျကို မကျြနှာမွငျရရုံအသာဆှဲလှပျကွညျ့တယျ။ ငစိုးတို့ရဲ့ အမွဲမှနျးပွီး တိုကျခဲ့ရတဲ့ အိမျမကျထဲကမငျးသမီးကွီး မခငျမအေေးပါပဲ။ လရောငျအောကျမှာ စှဲလနျးခဲ့ရတဲ့ မခငျမအေေးရဲ့မကျြနှာကို မွငျနရေတော့ နမျးကွညျ့ခငျြစိတျတှေ ထိနျးမရပဲ ပါးတဈဖကျကို ခပျဖှဖှနမျးကွညျ့မိတယျ။ နမျးဖူးခဲ့သမြှ ဒီတဈခါအရသာအရှိဆုံးပဲ နမျးခငျြနတေဲ့သူမို့လားမသိဘူး။ နောကျပါးတဈဖကျကိုလညျး အသားလေးနမျးလိုကျတယျ။ နိုးသှားမှာလညျး ကွောကျရသေးတာ နောကျ နဖူးပွငျ ပွောငျပွောငျလေး။
နှုတျခမျးခငျြးလညျး အသာအယာ တို့ထိလိုကျတယျ။ဒီလောကျလေးလုပျခှငျ့ရတာတောငျ ရငျဘတျတဈခုလုံးပေါကျထှကျမတတျ ရငျခုနျသံ တှမွေနျနတေယျ။ စောငျကိုပွနျအုပျထားခဲ့ပွီး အသံမထှကျအောငျအသာလေးပွနျလှညျ့လာခဲ့တယျ။ ခွံစညျးရိုးနားက ခွုံကှယျကနေ ကွကျခွံကိုခြောငျးကွညျ့နမေိတယျ။ ဦးသိနျးဆောငျက ကွကျခွံကို ဓာတျမီးတဈလကျနဲ့ လှညျ့ပတျကွညျ့ပွီး မီးဖိုးနားမှာ ပွနျထိုငျနပွေနျတယျ။ဟိုကောငျတှေ ဘယျနားရောကျနလေညျးမသိဘူး ဒီပုံစံနဲ့တော့ ခိုးဖို့လှယျမယျမထငျ။ငစိုးလညျး ဒီနားကခှာသငျ့ပွီ။ ငစိုး ခြီတုံခတြုံဖွဈနတေယျ ။ ဒီလိုအခွအေနကေ နောကျမကွုံနိူငျတော့ လကျလှတျရမှာ နှမွောနတေယျ။
မခငျမအေေး အိပျနတေဲ့အနားကို ငစိုးအသာလေးပွနျကပျလာတယျ။စောငျလေးပွနျခှာတယျ ။အေးတာတောငျအနှေးထညျဝတျမထားဘူး။လကျမောငျသား အိအိတှကေိုနမျးနမေိတယျ။ တဖွညျးဖွညျးလြှောပွီး လကျဖမိုးအထိ နမျးလာတယျ။စောငျကို ပွနျဖုံးပွီး ခွရေငျးဘကျကနေ စောငျကိုပွနျမကာ ခေါငျးထိုးဝငျလိုကျတယျ။ ပွလြေော့နတေဲ့ထဘီကို အောကျလေးနဲနဲလြှောပွီး ပေါငျသားတှကေိုနမျးနတေယျ။ အဖုတျနရောသှားစမျးတော့ အမှေးထူထူတှပေျေါလကျရောကျတယျ အတှငျးခံဝတျမထားဘူးပဲ အမှေးတှကေို ခပျရှရှကလေး ကိုငျကစားနမေိတယျ။ “ကိုသိနျးဆောငျ တျော ဘာလုပျနတောလဲ” မခငျမအေေးနိုးလာတော့ ငစိုးခေါငျးနပနျးကွီးသှားတယျ။
“တေျာ့ကို ရနှေေးပှဲလာပို့ဖို့ ပဲပွုတျတာစောငျ့ရငျး အိပျပြျော အု အု့ အ” ငစိုးလညျး မထူးတော့တဲ့အတူတူ စောငျထဲကနအေထကျတကျပွီး မခငျမအေေး နှုတျခမျးတှကေို သူစကားပွောနတေုနျး ဆှဲစုပျနမျးပဈတယျ။ အု ပွှတျ ပွှတျ အု အငျ့ အငျ့ အ မခငျမအေေးက ငစိုးကိုယျကွီးကို တှနျးရငျး စောငျကို ဆှဲလှပျပဈတယျ။ “ဟငျ နငျ … နငျ.. ကိုသိနျးဆောငျမဟုတျဘူး ငစိုး ငစိုး” ခငျမအေေး ထငျတော့ထငျတယျ ပါးစပျခငျြးတစေု့ပျကတညျးက ကိုသိနျးဆောငျက ဒါမြိုးမလုပျဖူးဘူး ပါးတို့ နဖူးတို့ပဲနမျးတာ ခုတော့ ရှာမွောကျပိုငျးက ကောငျလေးဖွဈနတေယျ။
“မခငျမအေေးရယျ ကြှနျတျော ဘယျလိုမှမနနေိူငျတော့လို့ပါ ကြှနျတျော မခငျမအေေးကို ဘာမှမလုပျပါဘူး နမျးရုံပဲ နမျးခှငျ့ပွုပါနျော” “မလိုခငျြဘူး မလိုဘူး နငျခုထှကျသှား ငါကိုသိနျးဆောငျကို အျောချေါ အှတျ အငျ့ ပွှတျပွှတျ အုအု” ငစိုး နှုတျခမျးတှကေို မလှတျတမျး ဆှဲစုပျရငျး လကျတဈဖကျက အဖုတျကွီးကို ခပျမွနျမွနျ ပှတျပေးနတေယျ။ “အငျ့ …အဟငျ့ ..ဟငျ့ ..ငါကလငျရှိမိနျးမဟဲ့ နငျ ကာမသေု ကံထိုကျမယျ ဟငျ့ ဟငျ့ နငျအတှကျလညျးမကောငျး ဘူး ငါလညျး ဖောတျပွနျတဲ့မိနျးမယုတျ မဖွဈခငျြဘူ့း အဟငျ့ ..အဟငျ့.. ဟငျ့ အီး.. .ဟီး…” မခငျမအေေး ပါးပွငျမှာ မကျြရညျတှေ ကလြာတာကို လရောငျမှာမွငျနရေတယျ။
ပါးပွငျပျေါက မကျြရညျစတှကေို ငစိုး နှုတျခမျးတှနေဲ့ တို့ထိ သုတျပေးရငျး “ကြှနျတျောလညျး ခုလိုအခွအေနကွေုံလာတော့ မနနေိူငျတော့လို့ပါ မခငျမအေေးရယျ အရငျကတညျးက မခငျမအေေးကို ကွိတျပွီးစှဲလနျးနခေဲ့ရတာပါ မပိုငျဆိုငျနိူငျမှနျးသိပမေယျ့ ယောကျြားရသှားတော့ ကြှနျတေျာ့မှာ ရူးမတတျအောငျခံစားခဲ့ရတာပါ” (ကွာကှကျတှေ ငိငိ) ငစိုးက မခငျမအေေးနဲ့ ပါးခငျြးကပျရငျး တိုးတိုးလေးပွောနတောဖွဈသညျ။လကျကိုလညျးအနားမပေး တဈဖကျက စောကျစေ့ ထိပျလေးကို ပှတျခပြေေးနသေလို တဈဖကျက မခငျမအေေးကိုဖကျထားရငျး နို့အုံကွီးကို မှီသလောကျ အကငြ်္ီပျေါကနေ ပှတျပေးနတော။
မခငျမအေေးက ငွငျးဆနျနပေမေယျ့ အရမျးကွီးတော့မရုနျး။ “ဟငျ့ … အဟငျ့… ငါကနငျ့အမအရှယျတောငျမဟုတျတော့ဘူးဟဲ့ နငျ့အဒျေါအရှယျလောကျရှိနပွေီ နငျ ကိုယျနဲ့ရှယျတူတှေ သှားကွိုကျပါလား အဟငျ့ အငျ့ အငျ့ …. အ..အား..” “အခဈြက ကိုယျ ဖွဈစခေငျြသလိုခိုငျးလို့မှမရတာ ခုလညျး ကိုခဈြခဲ့ဖူးတဲ့ လူတဈယောကျကို နောကျဆုံးအနနေဲ့ အားရပါးရ စိတျကွိုကျ ပှဖေ့ကျနမျးရှုပျခှငျ့ပွုပါနျော လှနျလှနျကြူးကြူး ဘာမှမလုပျဘူးလို့ကတိပေးပါတယျ အုပျခြုပျရေးမှူးအိမျတိုငျလညျးအပွဈဒဏျကို ခံပါ့မယျ နောကျဆုံးဆန်ဒလေးကိုတော့လိုကျလြောပေးပါနျော နျော… မခငျမအေေး” ခငျမအေေးမှာ ဘာလုပျရမှနျးမသိပဲ စိတျရှုပျနလေသေညျ။
ငစိုးက စကားတတှတျတှတျ ပွောရငျး မခငျမအေေးရဲ့ လညျတိုငျလေးတှေ ဂုတျသားတှကေို တရစမျနမျးနတေော့တယျ။ “ငစိုးရယျ….ငါ့မောငျကလိမ်မာပါတယျနျော ကိုသိနျးဆောငျရောကျလာရငျ ငါတို့နှဈယောကျလုံးကို သတျမှာဟ” “လိမ်မာဘူးဗြာ ဒီညသခေငျြလညျးသပေစတေော့ မထိနျးနိူငျတော့ဘူးဗြ” ငစိုးက ပွောရငျးဆိုရငျး အောကျကိုလြှောဆငျးပွီး မခငျမအေေးရဲ့ ပေါငျနှဈဖကျကို ဖွဲကာ ဆှပေးထားလို့အရညျတှစေို့နတေဲ့ အဖုတျကွီးကို လြှာနဲ့တဈခကျြအားရပါးရလကျြပလိုကျတယျ။မခငျမအေေးက တှနျ့ခနဲတဈခကျြဖွဈသှားပွီး ပေါငျနှဈခြောငျးကိုစကေ့ာ အဖုတျကွီးကို လကျနဲ့အုပျထားရငျး “အ.. အာ.. ဘာလုပျတာလဲငစိုးရယျ ငါ့ကိုငရဲမပေးပါနဲ့ ” ငစိုးက ဘာမှမပွောပဲ ပေါငျတှပွေနျဖွဲကာ ခေါငျးတိုးဝငျပွီး အဖုတျကို ပွနျလကျြနပွေနျတယျ။
မခငျမအေေးက သူ့ပေါငျကွားက ငစိုးခေါငျးကို အတငျးတှနျးရငျး “အ..အဟငျ့.. မလုပျပါနဲ့ ငါ့မောငျရယျ အား….အ..အ..ဘုနျးတှနေိမျ့ကုနျပါ့မယျကှယျ အငျ့..အ..အား..အ.အဟငျ့” ငစိုးက စောကျစိ နရောကို လြှာနဲ့ရမျးရှာရငျး တှတေ့ော့ လြှာဖြားနဲ့ထိုးကျောလိုကျ အစိကျုဆှဲစုပျလိုကျလုပျနတေယျ။ “အဟငျ့..ဟငျ့.အ..ငစိုးရယျ အ…အ..အား…ငါမနတေတျတော့ဘူး..အား..အ..ဘယျလိုတှလေုပျနတောလဲ..အဟငျ့..အ..အား..” မခငျမအေေးက လူးလှနျးကော့ပြံ နပွေီး ပကျလကျအနအေထားကနေ ဘေးတစေောငျးဖွဈသှားပွီး ငစိုးဆံပငျတှေ ဆှဲကိုငျကာ ပေါငျနှဈလုံးကွားမှာ အတငျးညှပျထားလို့ ငစိုးလှုပျမရတော့ဘူး။ “အမ! အမ ပေါငျတှအေတငျးညှဈမထားနဲ့ ကြှနျတျော လှုပျမရတော့ဘူး” နဲနဲလြှော့ပေးတော့မှ လြှာကို စောကျဖုတျထဲ ဝငျသလောကျထိုးထညျ့မှနှေောကျရငျး အဖုတျနှုတျခမျးသားတှကေို ဆှဲစုပျလိုကျ သှားနဲ့ ခပျဖှဖှကိုကျလိုကျလုပျပေးနတေယျ။
မခငျမအေေးက ကော့လနျပွီး ဘေးတစောငျးကနေ မှောကျခုံဖွဈသှားလို့ ငစိုးမကျြနှာက စောကျဖုတျအောကျတညျ့တညျ့ရောကျနပွေီ။ ငစိုးလညျး အားရပါးရ ဂြာပေးနတေုနျး “အငျး… ဟငျ့..အား..ငစိုး..ဖယျ..ဖယျ..ဖယျတော့..ငါသေးထှကျတော့မယျ..အား…အ..အ..ငါ..အ..သေးအရမျ့းပေါကျခငျြနပွေီ..ဟငျ့..အား..အ.အ..အား..အား.အား…..” ပွောရငျးဆိုရငျး မခငျမအေေးက ထှနျ့ထှနျ့လူးကာ တဆတျဆတျတုနျရငျး ငစိုးပါးစပျထဲကို အရညျတှေ ဒလဟောဝငျလာတယျ။ ရုနျးနပေမေယျ့ ငစိုးက ထမရအောငျတငျပါးတှကေို ဆှဲကိုငျထားလို့ သေးတှကေ ငစိုးမကျြနှာပျေါကို တဖွနျး ဖွနျး ပနျးမိနတေယျ။ အရညျတှရေော သေးတှပေါ ပါးစပျထဲရောကုနျပွီး တဈခြို့တဈဝကျ ဝငျကုနျကာ ကနျြတာကိုထှေးထုတျလိုကျရတယျ။
“အဟငျ့..အီး..ဟီး..နငျ့ကိုပွောပါတယျမလုပျပါနဲ့လို့ အဟငျ့ ..အငျ့..ဝငျ့..ဟငျ့..ခုတော့ သေးတှပေနျးမိပွီ..အဟငျ…ငါတော့ ငရဲတှကွေီးတောမှာပဲ..အဟငျ့..ဟငျ..ဟငျ…” “ငရဲမကွီးပါဘူး မမရယျ ကြှနျတျောကလိုလိုခငျြခငျြလုပျပေးတာပဲ ပွီးတော့ကြှနျတျောက အငယျ မမက အသကျကွီးတဲ့သူပါ” ငိုသံကွီးနဲ့ဗလုံးဗထှေးပွော ရငျး မွပွေငျကိုဆငျးကာ ထမိနျပွငျဝတျနတေယျ။စောနတုနျးကသာ ဏှာစောနဲ့မို့သတိမထားမိတာ မခငျမအေေး အျောညညျးသံက တျောတျောကယျြတယျ။ အိမျက ရှာစှနျခပျလှနျးလှနျးမှာရှိပွီး ကွကျခွံနဲ့ စညျးရိုးနဲ့ အိမျခွံဝငျးကပျနပေမေယျ့ ဦးသိနျးဆောငျမီးဖိုနရောက နဲနဲဝေးလို့သာတျောတော့တယျ။
ငစိုးက စကားတတှတျတှတျ ပွောရငျး မခငျမအေေးရဲ့ လညျတိုငျလေးတှေ ဂုတျသားတှကေို တရစမျနမျးနတေော့တယျ။ “ငစိုးရယျ….ငါ့မောငျကလိမ်မာပါတယျနျော ကိုသိနျးဆောငျရောကျလာရငျ ငါတို့နှဈယောကျလုံးကို သတျမှာဟ “လိမ်မာဘူးဗြာ ဒီညသခေငျြလညျးသပေစတေော့ မထိနျးနိူငျတော့ဘူးဗြ ငစိုးက ပွောရငျးဆိုရငျး အောကျကိုလြှောဆငျးပွီး မခငျမအေေးရဲ့ ပေါငျနှဈဖကျကို ဖွဲကာ ဆှပေးထားလို့အရညျတှစေို့နတေဲ့ အဖုတျကွီးကို လြှာနဲ့တဈခကျြအားရပါးရလကျြပလိုကျတယျ။မခငျမအေေးက တှနျ့ခနဲတဈခကျြဖွဈသှားပွီး ပေါငျနှဈခြောငျးကိုစကေ့ာ အဖုတျကွီးကို လကျနဲ့အုပျထားရငျး “အ.. အာ.. ဘာလုပျတာလဲငစိုးရယျ ငါ့ကိုငရဲမပေးပါနဲ့ ” ငစိုးက ဘာမှမပွောပဲ ပေါငျတှပွေနျဖွဲကာ ခေါငျးတိုးဝငျပွီး အဖုတျကို ပွနျလကျြနပွေနျတယျ။
“အဟငျ့..အီး..ဟီး..နငျ့ကိုပွောပါတယျမလုပျပါနဲ့လို့ အဟငျ့ ..အငျ့..ဝငျ့..ဟငျ့..ခုတော့ သေးတှပေနျးမိပွီ..အဟငျ…ငါတော့ ငရဲတှကွေီးတောမှာပဲ..အဟငျ့..ဟငျ..ဟငျ… “ငရဲမကွီးပါဘူး မမရယျ ကြှနျတျောကလိုလိုခငျြခငျြလုပျပေးတာပဲ ပွီးတော့ကြှနျတျောက အငယျ မမက အသကျကွီးတဲ့သူပါ” ငိုသံကွီးနဲ့ဗလုံးဗထှေးပွော ရငျး မွပွေငျကိုဆငျးကာ ထမိနျပွငျဝတျနတေယျ။စောနတုနျးကသာ ဏှာစောနဲ့မို့သတိမထားမိတာ မခငျမအေေး အျောညညျးသံက တျောတျောကယျြတယျ။ အိမျက ရှာစှနျခပျလှနျးလှနျးမှာရှိပွီး ကွကျခွံနဲ့ စညျးရိုးနဲ့ အိမျခွံဝငျးကပျနပေမေယျ့ ဦးသိနျးဆောငျမီးဖိုနရောက နဲနဲဝေးလို့သာတျောတော့တယျ။ “သှား ..သှား..ဟိုအိုးထဲမှာ မကျြနှာသဈ ပလုပျကငျြးခြေ” ငစိုးလညျး ရအေိုးဆီသှားကာ ပလုပျကငျြး မကျြနှာအမွနျသဈပလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ခွံစညျးရိုးနားအပွေးသှားပွီး ကွကျခွံဘကျခြောငျးကွညျ့တော့ ဦးသိနျးဆောငျက မီးဖိုဘေးမှာ ဆေးလိပျဖှာရငျး အရကျသောကျနတေုနျး။
ငစိုးလညျး မခငျမအေေးဆီ အမွနျပွနျလှညျ့လာခဲ့တယျ။ ကွကျခိုးဖို့လညျး စိတျမပါတော့ ဟိုကောငျတှလေညျး ခေါငျးထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ လောလောဆယျ တဏှာစိတျက ငယျထိပျရောကျနတော ငစိုးပွနျလှညျ့လာတော့ မခငျမအေေးက အိမျပျေါတကျဖို့ လှကေားခွရေငျးရောကျနပွေီ။ ငစိုးလညျး နောငျကအမွနျပွေးလိုကျသှားပွီး လှကေား အလယျလောကျမှာလိုကျမှီတော့ နောကျကနဆှေဲဖကျတယျ။ မခငျမအေေး ကအပျေါလှကေားထဈမှာရောကျနပွေီး ငစိုးက အောကျလှကေားထဈမှာပဲရှိသေးတော့ ပေါငျတံတှပေဲဖကျထားရပွီး ငစိုးမကျြနှာက မခငျမအေေးဖငျအိအိကွီးတှနေဲ့ တညျ့တညျ့မှာဖွဈနတေယျ။ “ငစိုးရယျ… ပွနျပါတော့ဟယျ. ဒီလောကျဆိုကွနေပျတော့ပေါ့” “မပွနျဘူးဗြာ ..အားရအောငျမှ မနမျးရသေးတာ နို့ကွီးတှလေဲမစို့ရသေးဘူး ..နို့ပေးစို့ခိုငျးဦး” “ငစိုးရယျ ..နငျနဲ့တော့ ငါသခေငျြတာပါပဲဟယျ..” ငစိုးက လှကေားနှဈထဈ ထပျတကျလိုကျပွီး အကငြ်္ီပျေါကနေ နို့တှကေို ပှတျကိုငျဆှဲနှယျနတေယျ။ွပွတျ..ွပွတျ..အု. နှုတျခမျးတှဆှေဲစုပျရငျး လြှာကို မခငျမအေေးပါးစပျထဲထိုးထညျ့တော့ သှားတှကေို ခပျတငျးတငျးစထေ့ားတယျ။
“သှားတှကေို စမေ့ထားနဲ့လေ နဲနဲဟထား” နားရှကျနှားကိုကပျတာ ခပျတိုးတိုးပွောရငျး နားရှကျဖြားလေးကို ခပျဖှဖှ တဈခကျြကိုကျလိုကျသေးတယျ။လြှာကိုပါးစပျထဲ ထိုးသှငျးမှကေလိနရေငျး လကျက အကငြ်္ီနှိပျသီးတှဆှေဲဖွုတျတာ နို့နှဈလုံးကို တဈလှညျ့စီကိုငျဆှဲကလိပေးနရေငျး နောကျလကျတဈဖကျကလညျး ဖငျတုံတုံအိအိတှကေို ဆှဲကိုငျလိုကျ ပှတျသပျပေးလိုကျလုပျနတေယျ။ “လာ ငစိုး အပျေါသှားရအောငျ နငျငါ့ကို လုပျရမှကနြေပျမယျဆိုလညျးမွနျ မွနျလုပျပွီးပွနျတော့ ဒါမယျ့ဒီကိစ်စကိုဘယျသူ့မှလြှောကျမပွောပါဘူးဆိုတဲ့ကတိ ပေးရမယျ” “ဟုတျ..ဟုတျကဲ့ စိတျခပြါ အမရဲ့ ကြှနျတျောက နှုတျလုံပါတယျ” “ဒီတဈခါပဲ ရမယျနျော နောကျနတှေ့ေ ဘယျတော့မှမရဘူး” “ဟီးဟီး… ဟုတျကဲ့ပါ” သူတို့အိပျခနျးထဲဆှဲချေါသှားပွီး အိပျယာမှာ စနျ့စနျ့ကွီးဝငျအိပျတယျ။ ငစိုးကခွထေောကျနှဈခြောငျးဆှဲမကာ ပုခုံးတဈဖကျတဈခကျြစီမှာတငျရငျး ဒဈဖူးနဲ့ အဖုတျဝမှာတကေ့ာ အမြိုးမြိုးကလိနတေယျ။ လူးလှနျ့နတေဲ့ မခငျမအေေးက ” လုပျမှာဆိုလုပျပါတော့ငစိုးရယျ ငါ့ကိုမြိုးမြိုးနှိပျစကျမနပေါနဲ့ ” ငစိုးလဲ ဦးသိနျးဆောငျတောငျ အားရအောငျသိပျမလုပျရသေးတဲ့ မခငျမအေေးရဲ့ စောကျဖုတျခပျကွပျကွပျထဲကို လီးတဈဆုံးထိုးသှငျးကာ အားကုနျဆောငျ့လိုးနတေော့တယျ။
ပွတငျးပေါကျရဲ့မီးရောငျအောကျမှာ ဆောငျ့ခကျြတှကွေောငျ့ ယမျးခါနတေဲ့ နို့ကွီးနှဈလုံးကို ကုနျးစို့လိုကျတယျ။ နို့ကွီးတှကေိုဆှဲကိုငျကာ နှုတျခမျးတှကေိုစုပျနမျးပွီး ဆောငျ့လိုးပေးနတေယျ။ “ဖောငျး ဖောငျး ဖောငျး…ဖှတျ…ပွှတျ…ပလှတျ…ဖှတျ…ပလှတျ…စှပျ….ဖှတျ……..” “ ပွှတျ…ဖှတျ…..စှပျ….ဖလှတျ….ဘှပျ………အငျ့ အ အ ငစိုး..ငစိုး” ငစိုးဆံပငျတှေ ဆောငျ့ဆှဲရငျး ကော့လနျကာ မခငျမအေေးပွီးသှားပါတယျ။ ငစိုးလညျး မနားတမျးတမျးဆောငျ့လိုးရငျး ခဏအကွာ အဖုတျကွီးထဲကို သုတျရတှေေ တပွဈပွဈ ပနျးထညျ့လိုကျတယျ။ “ကဲ..ကနြေပျပွီမလား ပွနျတော့” “ကြှနျတျောမပွီးသေးဘူး မောလို့ခဏနားတာ” ငစိုးဗွောငျညာလိုကျတယျ။ဝမှမဝသေးတာကိုး “ဟဲ့! ခုနက ပွီးတာမဟုတျဘူးလား ငါ ကိုသိနျးဆောငျကို အဖနျရညျသောကျဖို့ ပဲပွုတျသှားပို့ရဦးမယျ ” ငစိုး စိတျထဲ စိတျကူးတဈမြိုးရသှားတယျ ။
မခငျမအေေး အလုပျလုပျနတေုနျးနောကျကနလေိုးပေးနရေရငျ ကောငျးမှာပဲလို့တှေးမိတယျ “အမက လုပျစရာရှိတာလုပျလေ ကြှနျတျောက နောကျကနလေိုးပေးနမေယျ” “ငါတော့ သသောသခေငျြတော့တာပါပဲဟယျ” မခငျမအေေးကို နဲနဲကုနျးခိုငျးလိုကျပွီး နောကျကနေ အဖုတျကွီးထဲ လီးတဈဆုံးထိုးထညျ့လိုကျတယျ။ “ဒီတိုငျး တပျရကျအနအေထား နဲ့ပဲ ဖွေးဖွေး သှားနျော မပွုတျစနေဲ့” “အဲဟယျ ! နငျ့သဘော နငျနဲ့ကမြှ ငါလညျးဘာတှလေုပျပေးနရေမှနျးမသိတော့ဘူး” မီးဖိုခြောငျကိုမခငျမအေေးအဖုတျထဲ လီးတပျရကျအနအေထားအတိုငျး ကုနျးကုနျးကှကှနဲ့လိုကျသှားတယျ။ မီးဖိုပျေါကအိုးကနေ ပနျးကနျထဲကို ပဲပွုတျ ထညျ့နတေုနျး ဆောငျ့လိုးပဈတော့ “ဖွေးဖွေးလုပျဟဲ့ ပဲစတှေ့ေ အပွငျဖိတျစငျကုနျပွီ” “ဟီးဟီး…ဟုတျ အမ” ဆီ ဆား ဟငျးခြိုထညျ့သုပျနရေငျးလညျးလိုး ရနှေေးခပျရငျးလညျးလိုးနဲ့ အားလုံးပွငျဆငျပွီးတော့ ငစိုးနောကျတဈခြီပွီးသှားပွနျတယျ။
နှဈယောကျသားအိမျအောကျကို ဆငျးလာပွီး အောကျရောကျတော့ နောကျဆုံးတဈခြီပါလို့ဈေးဆဈပွီး ဦးသိနျးဆောငျကိုမွငျနရေတဲ့ ခွံစညျးရိုးနားက ခွုံကှယျမှာကုနျခိုငျးလိုကျတယျ။ မီးဖိုဘေးက ဦးသိနျးဆောငျကိုကွညျ့နရေငျးနဲ့ သူ့မိနျးမ နို့ကွီးတှဆှေဲကာ လိုးနရေငျး နဲ့ ခဏအကွာ အဖုတျထဲ သုတျရညျတှပေနျးကာ ပွီးသှားတော့တယျ။ မခငျမအေေး ကဦးသိနျးဆောငျဆီကိုထှကျသှားတော့ ဟိုကောငျတှနေဲ့ဆုံဖို့ ခြိနျထားတဲ့နရောသှားရငျ ကောငျးမလားစဉျးစားတယျ။ ဟိုကောငျတှကေ တဈနရောမရရငျ တဈနရောမှာ ရအောငျခိုးမှာပဲ။
သိပျလညျးစားခငျြစိတျမရှိတော့သလို ပငျပနျးနပွေီဖွဈလို့ အိမျပွနျပွီးပဲအိပျနလေိုကျတော့တယျ။ နောကျနေ့ ကွားရတဲ့သတငျးတှကေ ညက ဦးသိနျးဆောငျကွကျခွံမှာ ဘယျသူမှကွကျရအောငျ မခိုးနိူငျခဲ့ပါဘူးတဲ့ ရဲအောငျက မသေူကိုခိုးပွေးပါသတဲ့ မငျးဦးကလညျး မိနျးမခိုးတယျလို့ကွားရတယျ ထူးဆနျးတာက သူခိုးသှားတာ သူ့ရညျးစားမဟုတျပဲ ရညျးစားရဲ့အမပေါတဲ့ ပိုထူးဆနျးတာက သူ့ရညျးစား ငုဝါကလညျး သူ့ဦးလေးနောကျကိုခိုးရာလိုကျသှားပါသတဲ့ ကွားရတာတော့ ဦးလေးကခိုးတာ မဟုတျပဲ မငျးဦးရညျးစားကသာ သူ့ဦးလေးကိုခိုးတာဆိုပဲ။ ဒီနှဈတနျဆောငျတိုငျမှာ ကွားရသမြှအထူးအဆနျးတှခေညျြး။ ငစိုးလညျး မလုပျသငျ့ပမေယျ့ လုပျခငျြခဲ့တဲ့ဆန်ဒကို လုပျခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ဒီနှဈ တနျဆောငျတိုငျညလေးကို မနေိူ့ငျမညျ မဟုတျတော့ ……… ပွီးပါပွီ။
ညနေကတည်းက ညစာအတွက်ထမင်းကို တဝတပြဲစားထားပြီးပြီ။ ဒီနေ့ သိန်းဆောင် ကြက်ခြံမှာစောင့်အိပ်မှဖြစ်မယ်။ သူ့ရွာက ကောင်တွေအကြောင်းကို သိန်းဆောင် ကောင်းကောင်းသိတယ်။ တန်ဆောင်တိုင်ည အတွက် ရွာကကာလသားကောင်လေးတွေရဲ့ ပစ်မှတ်က သူ့ရဲ့ကြက်ခြံ ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ။ နောက်နေ့မှ ကြက်ခိုးတဲ့လူတွေကို သိလို့အရေးယူပေးပါ သွားပြောလို့မရဘူး။ တန်ဆောင်တိုင်ညမှာ ရွှေငွေ အဖိုးတန်ပစ္စည်းမဟုတ်ပဲ အသေးအမွှားခိုးတာလောက်နဲ့တော့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာပဲဆိုပြီး အရေးယူလေ့မရှိဘူး။ ရွာထဲမှာလည်း ဧည့်လာရင်ကျွေးမွေးဖို့ ဟင်းမရှိတဲ့အခါ ချက်စားဖို့တစ်နိူင်တစ်ပိုင် ကြက်မွေးကြပါတယ်။
ရွာထဲမှာ တန်ဆောင်တိုင်ညပြီးရင် ကြက်မပျောက်တဲ့အိမ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပဲ။ ကို့ယ်အိမ်ကကြက်သူခိုး သူ့အိမ်ကကြက်ကိုယ်ခိုးနဲ့ ပတ်ချာလည်နေတယ်။ သိန်းဆောင်တို့ရွာမှာ တန်ဆောင်တိုင်ညဆိုတာ ကြက်ခိုးကိုခိုးရမယ်လို့ အစဉ်အလာဖြစ်နေတော့တာပဲ။ သိန်းဆောင် ရဲ့ကြက်ခြံမှာ ကြက်ဖရော ကြက်မရော စုစုပေါင်းဆို ၅၆၈ကောင်ရှိတယ်။ ကြက်ဥ တွေကို မြို့ပေါ်ကဈေးမှာ တစ်ပတ်တစ်ခါ ဖောက်သည်ဈေးနဲ့သွားသွင်းလေ့ရှိတယ်။ သူ့ကြက်ခြံမှာ ဟိုဘက်ရွာကကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အလုပ်သမားခန့်ထားပါတယ်။ ရွာခဏပြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ မနေ့ကတည်းက လွှတ်လိုက်ရတာပင်။ နဲနဲမှောင်လာတော့ နေ့ခင်းကတည်းက ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီး ကြက်ခြံကိုသွားဖို့ပြင်ရတယ်။
ပစ္စည်းဆိုလို့ ထွေထွေထူးထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လောက်လေးခွတစ်လက်၊ လောက်စာလုံးထည့်ထားတဲ့လွယ်အိတ်နဲ့ ဒီနေ့မှဓာတ်ခဲအသစ်လဲထားတဲ့ ငါးဆစ်ထိုး ဓာတ်မီးတစ်လက်ပါ။ အဲ တစ်ညလုံး မအိပ်ပဲစောင့်ရမှာဆိုတော့ အောင်ဘုဆိုင်ကဆွဲလာတဲ့ ဆန်အရက်တစ်လုံးနဲ့ မိန်းမပြင်ပေးထားတဲ့ ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ် ပန်းကန်ကလည်း မပါမဖြစ်ပေါ့။ “မိန်းမရေ •• အခန်းထဲ က ဖက်ကြမ်းဆေးလိပ်စည်းနဲ့ မီခြစ်ရောပေးပါဦးဟ” “လာပြီ ကိုသိန်းဆောင် တော် ညကျရင် အဖန်ရည်နဲ့မြည်းဖို့ ပဲပြုတ်အိုးပြင်နေလို့ ခဏ” “ရော့ •••ဘာလိုသေးလဲ တော် တစ်ခုခုလိုရင်ကျုပ်ကို အော်ခေါ်လိုက် ကျုပ်ယူလာပေးမယ်”
“ငါ့မိန်းမကို အဲဒီလိုအလိုက်သိတတ်လွန်းလို့ ချစ်နေရတာ ဒီညတော့ ညစာငတ်ပါပြီ” “ဟမ်! တော် စောနကပဲ စာပြီးပြီလေ ပြန်ဆာလာလို့လား” “မိန်းမကလဲ အဲဒီညစာမဟုတ်ဘူးလေကွာ ဟဲဟဲ” တဟဲဟဲ လုပ်ရင်း သူ့မိန်းမ ပေါင်ကြားကို မျက်စပစ်ပြတယ်။ မိန်းမက ပင်ကိုယ် ကကို အရှက်အကြောက်ကြီးပြီး ရတာလည်းသိပ်မကြာသေးတော့ မျက်နှာကြီးနီရဲလာပြီး “တော် နော် ကလေးကလားတွေ လာပြောမနေနဲ့ တော်မရှက်ပေမယ့် ကျုပ်ရှက်တယ်” သိန်းဆောင်က တဟဲဟဲရယ်ရင်း ယူစရာရှိတာယူပြီး ကြက်ခြံဘက်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်~~~ သိန်းဆောင်ရဲ့ကြက်ခြံက အိမ်နဲ့ခြံခြင်းကပ်ရက်ဆောက်ထားတာဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံဝင်းက မလုံသော်လည်း ကြက်ခြံကိုတော့ သံဆူးကြိုးတွေနဲ့လုံခြုံအောင်ဆောက်ထားတာပဲ ။ ဒါမယ့်မရ ရွာကကောင်တွေက ရအောင်ဝင်ခိုးသည်။ မနှစ်ကမစောင့်လိုက်မိလို့ 15ကောင်လောက်ပါသွားတယ် ဘယ်နှစ်ဖွဲ့တောင်ဝင်ခိုးသွားလဲမသိဘူး။ လေးခွပါတယ်ဆိုသော်လည်း မှန်အောင်တော့ပစ်လို့မရဘူး။ လူရိပ်မြင်ရင် အစောင့်ရှိကြောင်းသိအောင် ခြောက်လှန့်ရုံလောက်သာပစ်ရတယ်။ကြက်ခြံရောက်တော့ ထင်းခြောက်တွေစုပြီး ပါလာတဲ့မီးခြစ်နဲ့ မီးအရင် ဖို ရတယ် ညဆိုနဲနဲအေးလာပြီလေ။ မီးဖိုဘေးမှာ ပါလာတဲ့အရက်လေးသောက် အမြည်းလေးစားရင်း သိန်းဆောင် စဉ်းစားခန်းဝင်နေမိတယ်။
အိမ်မှာ ခင်မေအေးတစ်ယောက်ထဲ အိပ်ရတာကြောက်နေမလားမသိဘူး။ သူလဲမတတ်သာလို့သာလာစောင့်ရတာ ရခါစပူပူနွေးနွေး မိန်းမနဲ့ ခွဲအိပ်ခြင်တာမဟုတ်။ ညအိပ်ချိန်လေးပဲဟိုဒင်း လုပ်ရတာမဟုတ်လား။ မြို့ကအသိတစ်ယောက်ကတော့ နေ့ညအချိန်မရွေးပဲ စိတ်လာတဲ့အချိန်ထလိုးပစ်တယ် လို့ပြောဖူးတယ်။ ရွာမှာတော့ နေ့ခင်းဘက်သူ့အလုပ်ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်စီလုပ်ရင်း ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှသာ မှောင်မှောင်မဲမဲထဲမှာ အာဝါဟ ဝိဝါဟရတာဖြစ်သည်။သူ့မိန်းမခင်မေအေးက အရှက်အကြောက်ကြီးတော့ပိုဆိုးသည် မီးမှိန်မှိန်လေးတောင်ထွန်းလို့မရ။ တကယ်တော့ သိန်းဆောင် အသက်လေးဆယ်ကျော် လူပျိုသိုးကြီးဖြစ်မှအိမ်ထောင်ကျခဲ့တာပင်။
သူ့အမေကလည်း အလုပ်အကိုင်နဲ့ ခြေခြေမြစ်မြစ် ရှိတဲ့သိန်းဆောင်နဲ့ သဘောတူတယ်။ဒီတော့ မိဘစကားမြေဝယ်မကျနားထောင်တဲ့ ခင်မေအေးဟာ သိန်းဆောင်နဲ့ အကြောင်းပါခဲ့ကာ ခုဆို တစ်လလောက်တောင်ရှိပြီပေါ့။ ခင်မေးအေးနဲ့ရပြီးကတည်းက သိန်းဆောင်လမ်းလျှောက်ရင် ကမ္ဘာ မှာနယ်ပယ်အများကြီး ချဲ့ထွင်နိူင်ခဲ့တဲ့ စစ်ဘုရင်ကြီး တစ်ယောက်လို(အထင်နဲ့ ရမ်းပြောတာပါ) ရင်ဘတ်ကြီး ကော့ကော့ ကော့ကော့နဲ့ လမ်းလျှောက်တော့တယ်။ မြင်တဲ့ လူတွေကတော့ မနာလိုတာရော သောက်မြင်ကပ်ကြတာရောပေါ့လေ။ သိန်းဆောင် အရက်သောက်ရင်း တောင်စဉ်ရေမရ တွေးနေမိတယ်။ ကြက်ခြံအနီးက ခြုံပုတ်ကွယ်မှာ လူ၎ယောက် လှုပ်ရှားနေကြတယ်။
ရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့ ရဲအောင်က ဒူးတစ်ဖက်ထောက်ကာ မုဆိုးထိုင်ထိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်မြောက်ရင်း နောက်က လူတွေ ကိုငြိမ်နေဖို့ အချက်ပြတယ်။ပြီးတော့လေသံ တိုးတိုးနဲ့ “ရဲ့ဘော်တို့ ခံတပ်ကိုတွေ့နေရတယ် ဒီတိုင်းလှုပ်ရှားလို့မရဘူး ငါတို့လူခွဲမှဖြစ်မယ်” မင်းဦးက ပြန်ပြောတယ် “လီးတွေပြောနေတာလား” “ရဲဘော်တို့ အမိန့်ကိုနာခံပါ ယောကျာ်းလေးနှစ်ယောက် သင့်တော်ရာကို လူခွဲကြ မေသူက ငါ့အနားမှာနေခဲ့ အခြေအနေမကောင်းလို့ တပ်ဆုတ်ရရင် စုရပ်မှာဆုံမယ်” တော်တော်ကောင်းသည့်ဗျူဟာမှူး မေသူကိုကျတော့သူ့နားမှာနေတဲ့ အဲဒီလို ဆရာလုပ်လွန်းလို့လည်း အဲကောင်ကိုကြည့်မရကြတာ နောက်နေဖင်ကို ပိတ်ကန်ပစ်လိုက်ဖို့ တာကောင်းတယ်။ လောလောဆယ် မီးဖိုဘေးမှာ ဦးသိန်းဆောင်ကိုမြင်နေရတာမို့ သူပြောတဲ့အတိုင်း လူစုခွဲဖို့လုပ်ကြတယ်။ သူတို့ပုံစံက ကြက်ခိုးမယ့်လူတွေနဲ့မတူ ဓားစာခံကို လာကယ်တဲ့ မရိန်းတပ်သားတွေကြလို့။ ကြက်ခြံကိုဘယ်နားက ဝင်ရင်ကောင်းမလဲလို့ ရှာနေရင်းနဲ့ ဦသိန်းဆောင်အိမ်နား တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာတယ်။
ဘာရယ်မဟုတ် အိမ်ဘက်လှမ်းကြည့်တော့ အိမ်ရှေ့အဖီထုပ်ပြီးမိုးထားတဲ့ အောက်ကကွပ်ပစ် ပေါ်မှာ လူတစ်ယောက် စောင်ခြုံပြီး ကွေးကွေးကြီးအိပ်နေတယ်။ ဦးသိန်းဆောင်က ကြက်ခြံမှာဆိုတော့ အိပ်နေတာ မခင်မေအေးပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးရင်း ငစိုးရင်ခုန်သလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ အိမ်ထဲမှာ မအိပ်ပဲဘာလို့အိမ်ရှေ့မှာ လာအိပ်နေတာပါလိမ့် ။ ဒါမှမဟုတ် ဧည့်သည်တစ်ယောက်ယောက်များလား။ ငစိုးက မှောင်ရိပ်ခိုလိုက်ပြီး အိပ်နေတဲ့လူကိုအနီးကပ်ချောင်းကြည့်နေသည်။ ခေါင်းမြီးခြုံ ထားလို့ဘယ်သူမှန်းသေချာမသိတာတောင်မှ မခင်မေအေးပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ရင်ကတဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာတယ်။
သူတို့ကာလသားတွေ အပျိုကြီးဘဝတုန်းက မျှော်မှန်းစွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ မခင်မေအေးမျက်နှာကိုတစ်ခါလောက်တော့ အနီးကပ်ကြည့်ပြီး နမ်းဖူးချင်မိသည်။ ငစိုးခြေသံလုံလုံ နဲ့အိပ်နေတဲ့လူနားကပ်သွားလိုက်တယ်။ ခေါင်းမြီးခြုံးထားတဲ့စောင်ကို မျက်နှာမြင်ရရုံအသာဆွဲလှပ်ကြည့်တယ်။ ငစိုးတို့ရဲ့ အမြဲမှန်းပြီး တိုက်ခဲ့ရတဲ့ အိမ်မက်ထဲကမင်းသမီးကြီး မခင်မေအေးပါပဲ။ လရောင်အောက်မှာ စွဲလန်းခဲ့ရတဲ့ မခင်မေအေးရဲ့မျက်နှာကို မြင်နေရတော့ နမ်းကြည့်ချင်စိတ်တွေ ထိန်းမရပဲ ပါးတစ်ဖက်ကို ခပ်ဖွဖွနမ်းကြည့်မိတယ်။ နမ်းဖူးခဲ့သမျှ ဒီတစ်ခါအရသာအရှိဆုံးပဲ နမ်းချင်နေတဲ့သူမို့လားမသိဘူး။ နောက်ပါးတစ်ဖက်ကိုလည်း အသားလေးနမ်းလိုက်တယ်။ နိုးသွားမှာလည်း ကြောက်ရသေးတာ နောက် နဖူးပြင် ပြောင်ပြောင်လေး။
နှုတ်ခမ်းချင်းလည်း အသာအယာ တို့ထိလိုက်တယ်။ဒီလောက်လေးလုပ်ခွင့်ရတာတောင် ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးပေါက်ထွက်မတတ် ရင်ခုန်သံ တွေမြန်နေတယ်။ စောင်ကိုပြန်အုပ်ထားခဲ့ပြီး အသံမထွက်အောင်အသာလေးပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်။ ခြံစည်းရိုးနားက ခြုံကွယ်ကနေ ကြက်ခြံကိုချောင်းကြည့်နေမိတယ်။ ဦးသိန်းဆောင်က ကြက်ခြံကို ဓာတ်မီးတစ်လက်နဲ့ လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီး မီးဖိုးနားမှာ ပြန်ထိုင်နေပြန်တယ်။ဟိုကောင်တွေ ဘယ်နားရောက်နေလည်းမသိဘူး ဒီပုံစံနဲ့တော့ ခိုးဖို့လွယ်မယ်မထင်။ငစိုးလည်း ဒီနားကခွာသင့်ပြီ။ ငစိုး ချီတုံချတုံဖြစ်နေတယ် ။ ဒီလိုအခြေအနေက နောက်မကြုံနိူင်တော့ လက်လွှတ်ရမှာ နှမြောနေတယ်။
မခင်မေအေး အိပ်နေတဲ့အနားကို ငစိုးအသာလေးပြန်ကပ်လာတယ်။စောင်လေးပြန်ခွာတယ် ။အေးတာတောင်အနွေးထည်ဝတ်မထားဘူး။လက်မောင်သား အိအိတွေကိုနမ်းနေမိတယ်။ တဖြည်းဖြည်းလျှောပြီး လက်ဖမိုးအထိ နမ်းလာတယ်။စောင်ကို ပြန်ဖုံးပြီး ခြေရင်းဘက်ကနေ စောင်ကိုပြန်မကာ ခေါင်းထိုးဝင်လိုက်တယ်။ ပြေလျော့နေတဲ့ထဘီကို အောက်လေးနဲနဲလျှောပြီး ပေါင်သားတွေကိုနမ်းနေတယ်။ အဖုတ်နေရာသွားစမ်းတော့ အမွှေးထူထူတွေပေါ်လက်ရောက်တယ် အတွင်းခံဝတ်မထားဘူးပဲ အမွှေးတွေကို ခပ်ရွရွကလေး ကိုင်ကစားနေမိတယ်။ “ကိုသိန်းဆောင် တော် ဘာလုပ်နေတာလဲ” မခင်မေအေးနိုးလာတော့ ငစိုးခေါင်းနပန်းကြီးသွားတယ်။
“တော့်ကို ရေနွေးပွဲလာပို့ဖို့ ပဲပြုတ်တာစောင့်ရင်း အိပ်ပျော် အု အု့ အ” ငစိုးလည်း မထူးတော့တဲ့အတူတူ စောင်ထဲကနေအထက်တက်ပြီး မခင်မေအေး နှုတ်ခမ်းတွေကို သူစကားပြောနေတုန်း ဆွဲစုပ်နမ်းပစ်တယ်။ အု ပြွတ် ပြွတ် အု အင့် အင့် အ မခင်မေအေးက ငစိုးကိုယ်ကြီးကို တွန်းရင်း စောင်ကို ဆွဲလှပ်ပစ်တယ်။ “ဟင် နင် … နင်.. ကိုသိန်းဆောင်မဟုတ်ဘူး ငစိုး ငစိုး” ခင်မေအေး ထင်တော့ထင်တယ် ပါးစပ်ချင်းတေ့စုပ်ကတည်းက ကိုသိန်းဆောင်က ဒါမျိုးမလုပ်ဖူးဘူး ပါးတို့ နဖူးတို့ပဲနမ်းတာ ခုတော့ ရွာမြောက်ပိုင်းက ကောင်လေးဖြစ်နေတယ်။
“မခင်မေအေးရယ် ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှမနေနိူင်တော့လို့ပါ ကျွန်တော် မခင်မေအေးကို ဘာမှမလုပ်ပါဘူး နမ်းရုံပဲ နမ်းခွင့်ပြုပါနော်” “မလိုချင်ဘူး မလိုဘူး နင်ခုထွက်သွား ငါကိုသိန်းဆောင်ကို အော်ခေါ် အွတ် အင့် ပြွတ်ပြွတ် အုအု” ငစိုး နှုတ်ခမ်းတွေကို မလွတ်တမ်း ဆွဲစုပ်ရင်း လက်တစ်ဖက်က အဖုတ်ကြီးကို ခပ်မြန်မြန် ပွတ်ပေးနေတယ်။ “အင့် …အဟင့် ..ဟင့် ..ငါကလင်ရှိမိန်းမဟဲ့ နင် ကာမေသု ကံထိုက်မယ် ဟင့် ဟင့် နင်အတွက်လည်းမကောင်း ဘူး ငါလည်း ဖောတ်ပြန်တဲ့မိန်းမယုတ် မဖြစ်ချင်ဘူ့း အဟင့် ..အဟင့်.. ဟင့် အီး.. .ဟီး…” မခင်မေအေး ပါးပြင်မှာ မျက်ရည်တွေ ကျလာတာကို လရောင်မှာမြင်နေရတယ်။
ပါးပြင်ပေါ်က မျက်ရည်စတွေကို ငစိုး နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ တို့ထိ သုတ်ပေးရင်း “ကျွန်တော်လည်း ခုလိုအခြေအနေကြုံလာတော့ မနေနိူင်တော့လို့ပါ မခင်မေအေးရယ် အရင်ကတည်းက မခင်မေအေးကို ကြိတ်ပြီးစွဲလန်းနေခဲ့ရတာပါ မပိုင်ဆိုင်နိူင်မှန်းသိပေမယ့် ယောက်ျားရသွားတော့ ကျွန်တော့်မှာ ရူးမတတ်အောင်ခံစားခဲ့ရတာပါ” (ကြာကွက်တွေ ငိငိ) ငစိုးက မခင်မေအေးနဲ့ ပါးချင်းကပ်ရင်း တိုးတိုးလေးပြောနေတာဖြစ်သည်။လက်ကိုလည်းအနားမပေး တစ်ဖက်က စောက်စေ့ ထိပ်လေးကို ပွတ်ချေပေးနေသလို တစ်ဖက်က မခင်မေအေးကိုဖက်ထားရင်း နို့အုံကြီးကို မှီသလောက် အင်္ကျီပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးနေတာ။
မခင်မေအေးက ငြင်းဆန်နေပေမယ့် အရမ်းကြီးတော့မရုန်း။ “ဟင့် … အဟင့်… ငါကနင့်အမအရွယ်တောင်မဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ နင့်အဒေါ်အရွယ်လောက်ရှိနေပြီ နင် ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူတွေ သွားကြိုက်ပါလား အဟင့် အင့် အင့် …. အ..အား..” “အချစ်က ကိုယ် ဖြစ်စေချင်သလိုခိုင်းလို့မှမရတာ ခုလည်း ကိုချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားရပါးရ စိတ်ကြိုက် ပွေ့ဖက်နမ်းရှုပ်ခွင့်ပြုပါနော် လွန်လွန်ကျူးကျူး ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ကတိပေးပါတယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်တိုင်လည်းအပြစ်ဒဏ်ကို ခံပါ့မယ် နောက်ဆုံးဆန္ဒလေးကိုတော့လိုက်လျောပေးပါနော် နော်… မခင်မေအေး” ခင်မေအေးမှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ စိတ်ရှုပ်နေလေသည်။
ငစိုးက စကားတတွတ်တွတ် ပြောရင်း မခင်မေအေးရဲ့ လည်တိုင်လေးတွေ ဂုတ်သားတွေကို တရစမ်နမ်းနေတော့တယ်။ “ငစိုးရယ်….ငါ့မောင်ကလိမ္မာပါတယ်နော် ကိုသိန်းဆောင်ရောက်လာရင် ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကို သတ်မှာဟ” “လိမ္မာဘူးဗျာ ဒီညသေချင်လည်းသေပစေတော့ မထိန်းနိူင်တော့ဘူးဗျ” ငစိုးက ပြောရင်းဆိုရင်း အောက်ကိုလျှောဆင်းပြီး မခင်မေအေးရဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲကာ ဆွပေးထားလို့အရည်တွေစို့နေတဲ့ အဖုတ်ကြီးကို လျှာနဲ့တစ်ချက်အားရပါးရလျက်ပလိုက်တယ်။မခင်မေအေးက တွန့်ခနဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုစေ့ကာ အဖုတ်ကြီးကို လက်နဲ့အုပ်ထားရင်း “အ.. အာ.. ဘာလုပ်တာလဲငစိုးရယ် ငါ့ကိုငရဲမပေးပါနဲ့ ” ငစိုးက ဘာမှမပြောပဲ ပေါင်တွေပြန်ဖြဲကာ ခေါင်းတိုးဝင်ပြီး အဖုတ်ကို ပြန်လျက်နေပြန်တယ်။
မခင်မေအေးက သူ့ပေါင်ကြားက ငစိုးခေါင်းကို အတင်းတွန်းရင်း “အ..အဟင့်.. မလုပ်ပါနဲ့ ငါ့မောင်ရယ် အား….အ..အ..ဘုန်းတွေနိမ့်ကုန်ပါ့မယ်ကွယ် အင့်..အ..အား..အ.အဟင့်” ငစိုးက စောက်စိ နေရာကို လျှာနဲ့ရမ်းရှာရင်း တွေ့တော့ လျှာဖျားနဲ့ထိုးကော်လိုက် အစိက်ုဆွဲစုပ်လိုက်လုပ်နေတယ်။ “အဟင့်..ဟင့်.အ..ငစိုးရယ် အ…အ..အား…ငါမနေတတ်တော့ဘူး..အား..အ..ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ..အဟင့်..အ..အား..” မခင်မေအေးက လူးလွန်းကော့ပျံ နေပြီး ပက်လက်အနေအထားကနေ ဘေးတေစောင်းဖြစ်သွားပြီး ငစိုးဆံပင်တွေ ဆွဲကိုင်ကာ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ အတင်းညှပ်ထားလို့ ငစိုးလှုပ်မရတော့ဘူး။ “အမ! အမ ပေါင်တွေအတင်းညှစ်မထားနဲ့ ကျွန်တော် လှုပ်မရတော့ဘူး” နဲနဲလျှော့ပေးတော့မှ လျှာကို စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်သလောက်ထိုးထည့်မွှေနှောက်ရင်း အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဆွဲစုပ်လိုက် သွားနဲ့ ခပ်ဖွဖွကိုက်လိုက်လုပ်ပေးနေတယ်။
မခင်မေအေးက ကော့လန်ပြီး ဘေးတစောင်းကနေ မှောက်ခုံဖြစ်သွားလို့ ငစိုးမျက်နှာက စောက်ဖုတ်အောက်တည့်တည့်ရောက်နေပြီ။ ငစိုးလည်း အားရပါးရ ဂျာပေးနေတုန်း “အင်း… ဟင့်..အား..ငစိုး..ဖယ်..ဖယ်..ဖယ်တော့..ငါသေးထွက်တော့မယ်..အား…အ..အ..ငါ..အ..သေးအရမ့်းပေါက်ချင်နေပြီ..ဟင့်..အား..အ.အ..အား..အား.အား…..” ပြောရင်းဆိုရင်း မခင်မေအေးက ထွန့်ထွန့်လူးကာ တဆတ်ဆတ်တုန်ရင်း ငစိုးပါးစပ်ထဲကို အရည်တွေ ဒလဟောဝင်လာတယ်။ ရုန်းနေပေမယ့် ငစိုးက ထမရအောင်တင်ပါးတွေကို ဆွဲကိုင်ထားလို့ သေးတွေက ငစိုးမျက်နှာပေါ်ကို တဖြန်း ဖြန်း ပန်းမိနေတယ်။ အရည်တွေရော သေးတွေပါ ပါးစပ်ထဲရောကုန်ပြီး တစ်ချို့တစ်ဝက် ဝင်ကုန်ကာ ကျန်တာကိုထွေးထုတ်လိုက်ရတယ်။
“အဟင့်..အီး..ဟီး..နင့်ကိုပြောပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ အဟင့် ..အင့်..ဝင့်..ဟင့်..ခုတော့ သေးတွေပန်းမိပြီ..အဟင်…ငါတော့ ငရဲတွေကြီးတောမှာပဲ..အဟင့်..ဟင်..ဟင်…” “ငရဲမကြီးပါဘူး မမရယ် ကျွန်တော်ကလိုလိုချင်ချင်လုပ်ပေးတာပဲ ပြီးတော့ကျွန်တော်က အငယ် မမက အသက်ကြီးတဲ့သူပါ” ငိုသံကြီးနဲ့ဗလုံးဗထွေးပြော ရင်း မြေပြင်ကိုဆင်းကာ ထမိန်ပြင်ဝတ်နေတယ်။စောနတုန်းကသာ ဏှာစောနဲ့မို့သတိမထားမိတာ မခင်မေအေး အော်ညည်းသံက တော်တော်ကျယ်တယ်။ အိမ်က ရွာစွန်ခပ်လှန်းလှန်းမှာရှိပြီး ကြက်ခြံနဲ့ စည်းရိုးနဲ့ အိမ်ခြံဝင်းကပ်နေပေမယ့် ဦးသိန်းဆောင်မီးဖိုနေရာက နဲနဲဝေးလို့သာတော်တော့တယ်။
ငစိုးက စကားတတွတ်တွတ် ပြောရင်း မခင်မေအေးရဲ့ လည်တိုင်လေးတွေ ဂုတ်သားတွေကို တရစမ်နမ်းနေတော့တယ်။ “ငစိုးရယ်….ငါ့မောင်ကလိမ္မာပါတယ်နော် ကိုသိန်းဆောင်ရောက်လာရင် ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကို သတ်မှာဟ “လိမ္မာဘူးဗျာ ဒီညသေချင်လည်းသေပစေတော့ မထိန်းနိူင်တော့ဘူးဗျ ငစိုးက ပြောရင်းဆိုရင်း အောက်ကိုလျှောဆင်းပြီး မခင်မေအေးရဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲကာ ဆွပေးထားလို့အရည်တွေစို့နေတဲ့ အဖုတ်ကြီးကို လျှာနဲ့တစ်ချက်အားရပါးရလျက်ပလိုက်တယ်။မခင်မေအေးက တွန့်ခနဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုစေ့ကာ အဖုတ်ကြီးကို လက်နဲ့အုပ်ထားရင်း “အ.. အာ.. ဘာလုပ်တာလဲငစိုးရယ် ငါ့ကိုငရဲမပေးပါနဲ့ ” ငစိုးက ဘာမှမပြောပဲ ပေါင်တွေပြန်ဖြဲကာ ခေါင်းတိုးဝင်ပြီး အဖုတ်ကို ပြန်လျက်နေပြန်တယ်။
“အဟင့်..အီး..ဟီး..နင့်ကိုပြောပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ အဟင့် ..အင့်..ဝင့်..ဟင့်..ခုတော့ သေးတွေပန်းမိပြီ..အဟင်…ငါတော့ ငရဲတွေကြီးတောမှာပဲ..အဟင့်..ဟင်..ဟင်… “ငရဲမကြီးပါဘူး မမရယ် ကျွန်တော်ကလိုလိုချင်ချင်လုပ်ပေးတာပဲ ပြီးတော့ကျွန်တော်က အငယ် မမက အသက်ကြီးတဲ့သူပါ” ငိုသံကြီးနဲ့ဗလုံးဗထွေးပြော ရင်း မြေပြင်ကိုဆင်းကာ ထမိန်ပြင်ဝတ်နေတယ်။စောနတုန်းကသာ ဏှာစောနဲ့မို့သတိမထားမိတာ မခင်မေအေး အော်ညည်းသံက တော်တော်ကျယ်တယ်။ အိမ်က ရွာစွန်ခပ်လှန်းလှန်းမှာရှိပြီး ကြက်ခြံနဲ့ စည်းရိုးနဲ့ အိမ်ခြံဝင်းကပ်နေပေမယ့် ဦးသိန်းဆောင်မီးဖိုနေရာက နဲနဲဝေးလို့သာတော်တော့တယ်။ “သွား ..သွား..ဟိုအိုးထဲမှာ မျက်နှာသစ် ပလုပ်ကျင်းချေ” ငစိုးလည်း ရေအိုးဆီသွားကာ ပလုပ်ကျင်း မျက်နှာအမြန်သစ်ပလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ခြံစည်းရိုးနားအပြေးသွားပြီး ကြက်ခြံဘက်ချောင်းကြည့်တော့ ဦးသိန်းဆောင်က မီးဖိုဘေးမှာ ဆေးလိပ်ဖွာရင်း အရက်သောက်နေတုန်း။
“သွားတွေကို စေ့မထားနဲ့လေ နဲနဲဟထား” နားရွက်နှားကိုကပ်တာ ခပ်တိုးတိုးပြောရင်း နားရွက်ဖျားလေးကို ခပ်ဖွဖွ တစ်ချက်ကိုက်လိုက်သေးတယ်။လျှာကိုပါးစပ်ထဲ ထိုးသွင်းမွှေကလိနေရင်း လက်က အင်္ကျီနှိပ်သီးတွေဆွဲဖြုတ်တာ နို့နှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီကိုင်ဆွဲကလိပေးနေရင်း နောက်လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဖင်တုံတုံအိအိတွေကို ဆွဲကိုင်လိုက် ပွတ်သပ်ပေးလိုက်လုပ်နေတယ်။ “လာ ငစိုး အပေါ်သွားရအောင် နင်ငါ့ကို လုပ်ရမှကျေနပ်မယ်ဆိုလည်းမြန် မြန်လုပ်ပြီးပြန်တော့ ဒါမယ့်ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူ့မှလျှောက်မပြောပါဘူးဆိုတဲ့ကတိ ပေးရမယ်” “ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ စိတ်ချပါ အမရဲ့ ကျွန်တော်က နှုတ်လုံပါတယ်” “ဒီတစ်ခါပဲ ရမယ်နော် နောက်နေ့တွေ ဘယ်တော့မှမရဘူး” “ဟီးဟီး… ဟုတ်ကဲ့ပါ” သူတို့အိပ်ခန်းထဲဆွဲခေါ်သွားပြီး အိပ်ယာမှာ စန့်စန့်ကြီးဝင်အိပ်တယ်။ ငစိုးကခြေထောက်နှစ်ချောင်းဆွဲမကာ ပုခုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတင်ရင်း ဒစ်ဖူးနဲ့ အဖုတ်ဝမှာတေ့ကာ အမျိုးမျိုးကလိနေတယ်။ လူးလွန့်နေတဲ့ မခင်မေအေးက ” လုပ်မှာဆိုလုပ်ပါတော့ငစိုးရယ် ငါ့ကိုမျိုးမျိုးနှိပ်စက်မနေပါနဲ့ ” ငစိုးလဲ ဦးသိန်းဆောင်တောင် အားရအောင်သိပ်မလုပ်ရသေးတဲ့ မခင်မေအေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ခပ်ကြပ်ကြပ်ထဲကို လီးတစ်ဆုံးထိုးသွင်းကာ အားကုန်ဆောင့်လိုးနေတော့တယ်။
ပြတင်းပေါက်ရဲ့မီးရောင်အောက်မှာ ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် ယမ်းခါနေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ကုန်းစို့လိုက်တယ်။ နို့ကြီးတွေကိုဆွဲကိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုပ်နမ်းပြီး ဆောင့်လိုးပေးနေတယ်။ “ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း…ဖွတ်…ပြွတ်…ပလွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…စွပ်….ဖွတ်……..” “ ပြွတ်…ဖွတ်…..စွပ်….ဖလွတ်….ဘွပ်………အင့် အ အ ငစိုး..ငစိုး” ငစိုးဆံပင်တွေ ဆောင့်ဆွဲရင်း ကော့လန်ကာ မခင်မေအေးပြီးသွားပါတယ်။ ငစိုးလည်း မနားတမ်းတမ်းဆောင့်လိုးရင်း ခဏအကြာ အဖုတ်ကြီးထဲကို သုတ်ရေတွေ တပြစ်ပြစ် ပန်းထည့်လိုက်တယ်။ “ကဲ..ကျေနပ်ပြီမလား ပြန်တော့” “ကျွန်တော်မပြီးသေးဘူး မောလို့ခဏနားတာ” ငစိုးဗြောင်ညာလိုက်တယ်။ဝမှမဝသေးတာကိုး “ဟဲ့! ခုနက ပြီးတာမဟုတ်ဘူးလား ငါ ကိုသိန်းဆောင်ကို အဖန်ရည်သောက်ဖို့ ပဲပြုတ်သွားပို့ရဦးမယ် ” ငစိုး စိတ်ထဲ စိတ်ကူးတစ်မျိုးရသွားတယ် ။
မခင်မေအေး အလုပ်လုပ်နေတုန်းနောက်ကနေလိုးပေးနေရရင် ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိတယ် “အမက လုပ်စရာရှိတာလုပ်လေ ကျွန်တော်က နောက်ကနေလိုးပေးနေမယ်” “ငါတော့ သေသာသေချင်တော့တာပါပဲဟယ်” မခင်မေအေးကို နဲနဲကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး နောက်ကနေ အဖုတ်ကြီးထဲ လီးတစ်ဆုံးထိုးထည့်လိုက်တယ်။ “ဒီတိုင်း တပ်ရက်အနေအထား နဲ့ပဲ ဖြေးဖြေး သွားနော် မပြုတ်စေနဲ့” “အဲဟယ် ! နင့်သဘော နင်နဲ့ကျမှ ငါလည်းဘာတွေလုပ်ပေးနေရမှန်းမသိတော့ဘူး” မီးဖိုချောင်ကိုမခင်မေအေးအဖုတ်ထဲ လီးတပ်ရက်အနေအထားအတိုင်း ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့လိုက်သွားတယ်။ မီးဖိုပေါ်ကအိုးကနေ ပန်းကန်ထဲကို ပဲပြုတ် ထည့်နေတုန်း ဆောင့်လိုးပစ်တော့ “ဖြေးဖြေးလုပ်ဟဲ့ ပဲစေ့တွေ အပြင်ဖိတ်စင်ကုန်ပြီ” “ဟီးဟီး…ဟုတ် အမ” ဆီ ဆား ဟင်းချိုထည့်သုပ်နေရင်းလည်းလိုး ရေနွေးခပ်ရင်းလည်းလိုးနဲ့ အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ ငစိုးနောက်တစ်ချီပြီးသွားပြန်တယ်။
နှစ်ယောက်သားအိမ်အောက်ကို ဆင်းလာပြီး အောက်ရောက်တော့ နောက်ဆုံးတစ်ချီပါလို့ဈေးဆစ်ပြီး ဦးသိန်းဆောင်ကိုမြင်နေရတဲ့ ခြံစည်းရိုးနားက ခြုံကွယ်မှာကုန်ခိုင်းလိုက်တယ်။ မီးဖိုဘေးက ဦးသိန်းဆောင်ကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ သူ့မိန်းမ နို့ကြီးတွေဆွဲကာ လိုးနေရင်း နဲ့ ခဏအကြာ အဖုတ်ထဲ သုတ်ရည်တွေပန်းကာ ပြီးသွားတော့တယ်။ မခင်မေအေး ကဦးသိန်းဆောင်ဆီကိုထွက်သွားတော့ ဟိုကောင်တွေနဲ့ဆုံဖို့ ချိန်ထားတဲ့နေရာသွားရင် ကောင်းမလားစဉ်းစားတယ်။ ဟိုကောင်တွေက တစ်နေရာမရရင် တစ်နေရာမှာ ရအောင်ခိုးမှာပဲ။
သိပ်လည်းစားချင်စိတ်မရှိတော့သလို ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်လို့ အိမ်ပြန်ပြီးပဲအိပ်နေလိုက်တော့တယ်။ နောက်နေ့ ကြားရတဲ့သတင်းတွေက ညက ဦးသိန်းဆောင်ကြက်ခြံမှာ ဘယ်သူမှကြက်ရအောင် မခိုးနိူင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ ရဲအောင်က မေသူကိုခိုးပြေးပါသတဲ့ မင်းဦးကလည်း မိန်းမခိုးတယ်လို့ကြားရတယ် ထူးဆန်းတာက သူခိုးသွားတာ သူ့ရည်းစားမဟုတ်ပဲ ရည်းစားရဲ့အမေပါတဲ့ ပိုထူးဆန်းတာက သူ့ရည်းစား ငုဝါကလည်း သူ့ဦးလေးနောက်ကိုခိုးရာလိုက်သွားပါသတဲ့ ကြားရတာတော့ ဦးလေးကခိုးတာ မဟုတ်ပဲ မင်းဦးရည်းစားကသာ သူ့ဦးလေးကိုခိုးတာဆိုပဲ။ ဒီနှစ်တန်ဆောင်တိုင်မှာ ကြားရသမျှအထူးအဆန်းတွေချည်း။ ငစိုးလည်း မလုပ်သင့်ပေမယ့် လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒကို လုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဒီနှစ် တန်ဆောင်တိုင်ညလေးကို မေ့နိူင်မည် မဟုတ်တော့ ……… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged လုပျခငျြတဲ့ဆန်ဒကို